July 2018 – Kalfadhi
July 31, 2018 July 31, 2018 Kalfadhi
Xildhibaan Cabdikariin Cali Nuur oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamaaka Hirshaabeelle gaar ahaan guddiga dastuurka iyo dib u hishiisiinta oo u warramay warbaahinta Kalfadhi ayaa sheegay in tiro badan oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamaanka Hirshabeelle ay sababo amni uga maqanyihiin kalfadhiga afaraad ee Baarlamaanka Hirshabeelle. Baarlamaanka Hirshabeelle oo ka kooban 117 mudane waxaa hadda dhaarsan oo buuxiyay shuruudaha xildhibaannimada 99 mudane. 99-kaas waxaa hadda xarunta Baarlamaanka Hirshabeelle ku sugan 66 mudane, Inta kale ayaa ku sugan Muqdosho. Waxa uuna xildhibaan Cabdirakiim sheegay in mudanyaashaas aysan soo mari karin jidka…
July 31, 2018 Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Soomaalilaan Baashe Maxamed Faarax oo u warramay warbaahinta Kalfadhi ayaa sheegay in bisha 29-ka Maarso sanadka 2019-ka ay qaban doonaan doorashada golaha wakiillada Soomaaliland Guddoomiye Baashe waxa uu sheegay in ay qabaan rejo aad u wanaagsan isla markaana ay horayna ugu diyaar garoobeen haddana ay dhammeystiri doonaan qorshaha doorashada. 82 mudane ayuu sheegay in la soo dooran doono oo kakala imaanaya lix gobol “ oo Soomaalilaan ka tirsan. ” Guddoomiye Baashe ayaa sheegay in ay ka gaashaateen sabab walba oo baajin karta doorashada Golaha wakiillada. 2005-tii ayay…
July 30, 2018 Kalfadhi
Booqashada madaxweyne Farmaajo ee dalka Eritrea ayaa laga muujiyey guulo iyo rejo wayn oo usoo hoyatay labada shacab iyo labada dawladood. Sidoo kale cabsi ayaa laga muujiyay isbedellada gobalka iyo dawrka madaxda Eritrea. Haddaba qormadaan kooban waxaan is barbar-dhigeynaa rejada iyo cabsida: Soomaaliya & Eritrea waxaa ka dhaxeeyay xiriir sokeeye muddo ka badan 1000 sano kaas oo ku salaysnaa deegaanka Geeska Afrika, soo gelitaankii Diinta Islaamka ee Geeska Afirika, dagaalladii dhex maray muslimiinta Geeska Afrika iyo Kirishtaanka, dawladihii Islaamka ee Geeska Afrika soo maray, boqortooyadii Islaamka ee Turkiga ee Geeska…
Xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale iyo Sanatar Xuseen Shiikh Maxamuud oo u warramay warbaahinta Kalfadhi ayaa sheegay in fasaxii Baarlamaanku galay kaddib ay ku laabteen deegaannadii laga soo doortay isla markaana ay kasoo aruuriyeen xog ay la wadaagi doonaan Golayaasha Baarlamaanka. Xildhibaan Afaraale waxa uu sheegay in dhibaatada ugu weyn ee dadka reer Koonfur Galbeed ay qabaan ay tahay maciishadda nololeed oo qaali ah. Kala xirnaashada deegaannada maamulka iyo dhibaatada ka jirta jidka isku xira Muqdisho iyo Baydhabo ayuu sheegay in ay sababtay in wax walbaa qaaliyoobeen. Magaalooyinka Baydhabo iyo Xudur…
July 27, 2018 Kalfadhi
Xoghayaha guddiga difaaca Golaha Shacabka Xildhibaan Sadiiq Warfaa oo la hadlay warbaahinta Kalfadhi ayaa sheegay in sharciga xaqsiinta ciidanka oo hadda horyaalla Golaha Shacabka uu rejo wanaagsan u yahay ciidamada kala duwan ee qalabka sida, isla markaasna ay aad ugu han-weynyihiin in marka uu furmo kalfadhiga afraad ay xildhibaannadu siiyaan codka oggolaashaha. Sharcigan ayuu sheegay in uu baddali doono sharci horay u jiray kaas oo soo baxay Diseembar 1969-kii lana dhihi jiray “ Sharci lambar lix “ kaas oo ciidamada qalabka u aqoonsanaa kaliya ciidamada xoogga ama milatariga. Balse hadda…
July 26, 2018 July 26, 2018 Kalfadhi
Xildhibaan Maxamuud Cali Magan waxa uu ka mid yahay xildhibaannada baarlamaanka 10-aad, wuxuu ku dhashay dagmada Baardheere ee xarunta gobalka Gedo sanadkii 1956-dii. Maamulka Jubbalanad ayaa laga soo doortay waana markii labaad ee uu ee noqdo xildhibaan. 17-kii Nofeembar 2017 ayaa markale lugu soo doortay magaalada Kismaayo. Waxbarashada iyo takhasuska Dugsiga hoose dhexe wuxuu ku qaatay iskuulka Rugta ee magaalada Kismaayo. Halka dugsiga sarana uu Muqdisho kaga baxay sanadkii 1972-dii isagoo ka qalin jabiyay Iskuul Sare Banaadir. Sanadkii 1776-dii Kaddib hawlihii gurmadka qaranka wuxuu shaqo ka billaabay wasaaraddii arrimaha dibadda…
Shiikh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland oo wareysi siiyay warbaahinta Kalfadhi waxa uu sheegay in Baarlamaankiisu uu u baahanyahay in laga taageero dhinacyo kala duwan sida safarrada ay ku tagayaan gobolllada iyo degmooyinka Jubbaland. Guddoomiyaha ayaa sheegay in waxyaabaha ugu waaweyn ee ay u baahanyihiin ay sidoo kale ka mid tahay helidda hool ay ku qabsadaan shirarkooda si howlaha baarlamaanka loo socodsiiyo iyo tababbarro loo fidinayo xildhibaannada iyo guddoonka. Baarlamaanka Jubbaland oo ka kooban 75 mudane kuna jira kalfadhigiisii afaraad ayuu sheegay guddoomiye Shiik Cabdi in waxyaabaha ay muhiimadda…
Digreeto kasoo baxday xafiiska raysulwasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre maanta oo ay taariikhda ku beegan tahay 26-ka Luulyo 2018 waxaa xilkii wasiirnimo laga qaaday wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada mudane C/raxmaan Daahir Cusmaan. Wareegtadan kasoo baxday xafiiska raysulwasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa xilkan in uu sii haynayo lagu sheegay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada mudane C/raxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir. Warbaahinta dowladda waxaa digreetadaas ka akhriyay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Xildhibaan Aadam Isaaq Cali. Xilka qaadistiisa ayaana ayaana salka ku heysa hadal uu warbaahinta siiyay…
July 25, 2018 July 25, 2018 Kalfadhi
Kalankii labaad ee kalfadhigii saddexaad ee Aqalka Sare ayaa aad looga dooday xeerka gobinonnimada oo Golaha Shacabku kasoo gudbay kaas oo dalka looga mamuucayay in ay ka shaqeyso shirkadda DP-World. Ku dhawaad 10 sanatar ayaa kulankii saddexaad ee kalfadhigii saddexaad ka hadlay kuwaas oo aragtidooda ka dhiibtay. kulankii saddexaad ee kalfadhigii saddexaad oo dhacay 15 Maarso 2018 ayna soo xaadireen 36 ayaa lagu go’aamiyay in dalka aysan ka shaqeyn shirkadda dekadaha ka shaqeysa ee DP-World. 28 mudane ayaa oggolaatay xeerka dhawrista gobonnimada iyo midnimada geyiga Soomaaliyeed, 6 sanatar ayaa diidday…
July 25, 2018 Kalfadhi
Sanatar Xuseen Shiikh Maxamuud Xuseen waxa uu ka mid yahay xildhibaannada golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya, waxa uu 2-dii jannaayo 1982-dii ku dhashay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Waxaa laga soo doortay maamulka Koonfur Galbeed iyadoo 19-keedii Oktoobar ee sanadkii 2016-kii lagu doortay magaalada Baydhabo. Waxbarashada iyo takhasuska Waxbarashadiisa aasaasiga ah ilaa heer-ka koowaad ee jaamacadda waxa uu ku qaatay gudaha dalka. Dugsigii hoose waxa uu kusoo qaatay iskuulkii Garasweyne oo ku yaallay tuulada Garasweyne ee u dhaw magaalada Xudur , halka fasallada dhexe ilaa sarana…